Mazwi atinopa kumhepo, naLaura Imai Messina
Rufu runoitwa denatured kana isiri iyo chaiyo yekubuda kubva panzvimbo. Nokuti kusiya nyika ino kunodzima zvisaririra zvose zvendangariro. Chisingambofi chakasikwa zvachose rufu rwemudiwa iyeye aigara aripo, kunyange zvishoma munjodzi yakakwana. Kurasikirwa kwakanyanya kusingatarisirwe ...
Blue Sky, naDaria Bignardi
Pave nechinguva kubva kurwadziswa kwakasiya rudo rwekuita nguva kuna chiremba wepfungwa, semwanakomana wemuvakidzani wese. Kurondedzera kushungurudza kwemoyo kunotora chimwe chidimbu mumaoko aDaria Bignardi. Nekuti ndezvekusunungura nhamo dzavanosiya vari vega pamberi peUniverse iyo ...
Operation Kazan, naVicente Vallés
Murume wenhau kuti Vicente Vallés ndeyevaoni vakawanda, anosvika neinovhero inogona kuratidzwa senyaya yazvino iyo yekutanga musoro wenhau webasa. Nekuti chinhu ichi chinobva kuRussia uye kubva kuhondo inotonhora inotonhora yakaitwa nhasi kuenda ...
Tsitsi Ink, naPatrick Modiano
Mune chikwereti chayo chisingaperi kusvika muzana remakore rechiXNUMX. Inguva iri kuwedzera kuzara nenyaya huru sezvatinoenda nekufamba kwenguva, Modiano anotitungamira kuburikidza nechirongwa chinodzokorora iyo nostalgic pfungwa ye ephemeral. Mune pfungwa yekutevera inokwanisika yatinogona, kana…
Peji1 Peji2 ... Peji118 Zvadaro →